चकलेटः स्वास्थ्यका लागि कति फाइदा, कति हानी? - IAUA
ramkrishna October 24, 2017	कति हानी?चकलेटः स्वास्थ्यका लागि कति फाइदा
काठमाडौं । चकलेट भनेपछि दंग नपर्ने मानिस सायदै हुन्छन्। चकलेट तपाईंको मनपर्ने खानेकुरा नभए पनि चकलेटले मायाप्रेम, खुसीयाली र पुरस्कारका रुपमा सबैलाई मुग्ध पार्छ। चकलेटको स्वाद लिन तपाईंलाई अझै केही कारण चाहिए अरु केही नगर्नुस्, वैज्ञानिकसँग सोध्नुस्। चकलेट पारखीका अनुसन्धान वा केही स्वघोषित चकलेट क्रेजीहरूले त यसले रक्तचाप घटाउने, मुटसम्बन्धी रोग लाग्न नदिने, रगतमा ग्लुकोजको मात्रा (ब्लड सुगर लेभल) घटाउने र तनाव कम गर्ने जस्ता अनेकौँ दाबी गर्छन्।
त्यसपछि कुरा आउँछ, दुध र चिनीको। ‘व्यावसायिक उत्पादन हुने चकलेट शुद्ध चकलेट होइनन्। दूध र चिनी मिसाइएका चकलेटले तपाईंलाई फाइदा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ डा. ख्वाजा भन्छन्। डा. ख्वाजाको यो भनाइको निष्कर्ष भनेको, फ्ल्याभोनोइड्सको मात्रा नभएका ‘बार’ वा ‘हर्सेेज’ जस्ता चकलेट खाएर स्वास्थ्यका लागि फाइदा लिन चाहनेहरू निराश हुनुपर्नेछ। ख्वाजाको भनाइ सन् अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर युरोप र अमेरिकामा मिल्क चकलेट बजारमा आउँदा गरिएका विज्ञापनभन्दा ठ्याक्कै विपरीत छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मिल्क चकलेट हाम्रो भोजनको पोषक हिस्सा होइन।
(क्यारिना स्टरस, विशेष संवाददाता सिएनएन)weeklynepal
Previous Previous post: विषालु च्याउ कसरी चिन्ने र विषबाट बच्न के गर्ने ?
Next Next post: सुक्खा फलफूलको फाइदा ताजाको भन्दा धेरै